भाईरल पुजा देबकोटाले बाबालाई चोर भन्दा चल्यो रुवाबासी,…. भिडियो हेर्नुहोस – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भाईरल पुजा देबकोटाले बाबालाई चोर भन्दा चल्यो रुवाबासी,…. भिडियो हेर्नुहोस
भाईरल पुजा देबकोटाले बाबालाई चोर भन्दा चल्यो रुवाबासी,…. भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तल समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ, पुरा हेर्नुहोला ।
सकारात्मक ऊर्जाका लागि केही केही बिरुवाले पनि साथ दिने गर्छन्।हरियालीमा मानिसको मनमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सहायता गर्छ । त्यस कारण केही यस्ता बोट–बिरुवा छन्, जसले हामीलाई ऊर्जावान बन्न मद्दत गर्छन् । तुलसी: तुलसी स्वास्थ्यका हिसाबले पनि निकै गुणकारी वस्तु हो । यो गुणकारी बिरुवा स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन सकारात्मक ऊर्जाका लागि पनि निकै फाइदायुक्त हुन्छ ।
मेहन्दी:सकारात्मक ऊर्जाका लागि शरीर तथा मन चुस्त र दुरुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । शरीर र मनको थकानलाई टाढा गर्न लागि मेहन्दी निकै फाइदाजनक हुन्छ । यो बिरुवा घरमा राख्दा निन्द्रको समस्या समेत अन्त्य हुन्छ । मनिप्लान्ट: घरको वातावरणलाई खुसी र सकारात्मक बनाउनका लागि मनिप्लान्ट पनि निकै सहयोगी हुनेछ । यस बिरुवाले घरमा रहेको नकारात्मकतालाई बाहिर लैजान्छ ।
घ्यूकुमारी: शरीरको सुन्दरताका लागि एलोभेराको निकै महत्त्व छ तर के तपाईंलाई घरमा रहेको नकारात्म ऊर्जा हटाउनका लागि एलोभेरा महत्त्वपूर्ण हुने कुरा जानकारी छ ?बाँस: ​बेम्बो ट्रीले भाग्य तथा प्यारयुक्त अवस्था बनाइराख्नका लागि सहयाता गर्छ । यो सानो खालको बाँसलाई खासै हेरचाहको आवश्यकता पनि पर्दैन ।सानो शिशाको भाँडोमा थोरै पानी रखेर एक कुनामा यसलाई राख्न सकिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक नेपाली विद्यार्थीको मृxत्यु